Puntland iyo Ethopia oo ka arrinsaday wada-shaqeynta dhinaca amaanka iyo dhaqaalaha labbad dhinac – Radio Daljir
Puntland iyo Ethopia oo ka arrinsaday wada-shaqeynta dhinaca amaanka iyo dhaqaalaha labbad dhinac
Seteembar 3, 2013 8:06 b 0
Adis-Ababa, September 3, 2013 – Hotel Sheraton ee magaalada Adis-Ababa dalka Ethopia waxaa xalayto kulan balaaran ku qaatay Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole iyo wasiirka arrimaha debeda ee dalka Ethopia, labbada masuul ayaa ka wada-hadlay siyaasada Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland ayaa kulanka ka sheegay in ay Ethopia door muhiim ah ka qaadatay xasilinta iyo dib u soo celinta Qarannimadii Soomaaliya, wuxuu sheegay in ay kaalin weyn oo aan la ilaawi karin in ay ahayd heshiiskii dowladda federaalka iyo maamulka Jubba ee ay Ethopia qabatay.
Ethopia iyo Puntland waxay ka wada-hadleen xalayto sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhinaca dhaqaalaha iyo wada-shaqeynta amaanka ee sida khaaska ah uga dhexeeya maamulka iyo dowladda Ethopia, labbada dhinac ayaa sheegay in howlaha isla shaqeynta ay meel wanaagsan marayso.
Dowladda Ethopia ayaa iyana sheegtay in laga shaqeeyo amniga Soomaaliya ay tahay wax weyn oo faa?ido u leh gobolka, Wasiirka arrimaha debeda ee Ethopia Tedros Adhanom ayaa xusay in Puntland ay mudan tahay in mar kasta lagu amaano kaalinta ugu weyn oo ay ku lahayd dib u heshiisiintii Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynaha Puntland iyo wefdiga la socda ayaa la filayaa in ay maanta la kulmaan ra?isal wasaaraha Ethopia Hailemariam Desalegn, iyo wasiiro ka mid ah xukuumada Ethopia.
Baahin: Salaasa, 3 September 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Xaliimo Sacdiya Cabdilaahi Cali~ Daljir ~ Garowe
Ururka shabaab oo sheegay in ay weerar ku qaadeen safarkii Madaxweynaha iyo dowladda oo beenisay